နည်းနာကြွယ်တဲ့ တပ်မတော်(နှင့် လွှတ်တော်တွင်းဗျူဟာများ) | ဧရာဝတီ
နည်းနာကြွယ်တဲ့ တပ်မတော်(နှင့် လွှတ်တော်တွင်းဗျူဟာများ)
မင်းဇင်| May 10, 2012 | Hits:6,217
1 | | ၂၀၁၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကစလို့ မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ အတော်လေးပါးရည်နပ်ရည်ရှိတယ်ဆိုတာကို သက်သေ ပြခဲ့ပါတယ်။ မျိုးဆက်သစ် စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှက အခြားတပ် ဖွဲ့တွေနဲ့ အဆင့်တူဖြစ်အောင် စစ်တပ်ကို ခေတ်မှီတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဗျူဟာက (တရုတ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ အထီးကျန်ဖြစ်နေတာကို အခွင့်ကောင်းယူနေတယ်လို့ လက်ခံထားကြတာမို့) တရုတ်အပေါ် မှီခိုနေရတာ လျှော့ချဖို့ နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ အပေးအယူလုပ် ညှိနှိုင်းနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကို အမိအရ ဆုပ်ကိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လွှတ်တော်ထဲမှာ တပ်မတော်ရဲ့ အနေအထားကို ပိုအားကောင်းလာအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ (ဓာတ်ပုံ- Reuters)
မြန်မာပြည်သွားတဲ့ အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဟာ များသောအားဖြင့် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့ ပွင့်လင်းမှုအပေါ် သဘောကျကြတယ်လို့ အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက ကျနော့်ကို ပြောပါတယ်။ “အမေရိကန်အစိုးရ အထက်တန်းအရာရှိတွေ မြန်မာစစ်တပ် ဦးစီးချုပ် ဒါမှမဟုတ် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့ တွေ့ပြီး တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ စစ်တပ်က ကျူးလွန်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအကြောင်း ပြောကြတိုင်း မြန်မာစစ်တပ်ဘက်က ငြင်းဆိုတာမရှိဘူး” လို့ တယောက်က ပြောပါတယ်။ “အောက်ခြေမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေ သိပ်ကြည့် မကောင်းဘူးလို့ သူတို့က ပြောတယ်၊ ဒါတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ တပ်မတော်အရာရှိတွေအတွက် သင်တန်းတွေအပါအဝင် အမေရိကန်အစိုးရဆီက အကူအညီတောင်းတယ်” လို့လည်း သူက ဆိုပါသေးတယ်။ မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုင်တဲ့အကွက်က မြှားခေါ်တဲ့ အပိုင်ကွက်လို့ ပြောရမှာပေါ့။
အမေရိကန်ဦးဆောင်ပြီး အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသထဲမှာ နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေတဲ့ “ရွှေမြွေဟောက် (Cobra Gold)” နိုင်ငံစုံ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ပွဲမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲလိုတဲ့အကြောင်း မြန်မာဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာ သူတို့ဆန္ဒကို ထုတ် ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟေလာရီ ကလင်တန် ကလည်း အမေရိကန် ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ (CIA) အကြီးအကဲ ဒေးဗစ် ပက်ထရော့စ် (David Petraeus) ကို ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို အလည်အပတ်သွားဖို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေက တိုက်ဆိုင်မှု မဟုတ်ပါဘူး။
အနောက်နိုင်ငံတွေက မျက်နှာသာပေးခံရဖို့ သွေးဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာ တပ်မတော်အနေနဲ့ နိုင်ငံထဲ ဖြစ်ပေါ်လာ နိုင်တဲ့ ဘယ်လို အာရပ်နွေဦးပုံစံ လူထုတော်လှန်ရေးမျိုးကိုမဆို နှိမ်နှင်းမှုမလုပ်ဘဲ ရှောင်ရှားလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးချုပ်ကိုင်မှုတွေ လျှော့ချပစ်တာ၊ မြို့ပြအတိုက်အခံနဲ့ တိုင်းရင်းသားသူပုန်တွေကို အစိုးရဦးဆောင်တဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းမှုထဲ ဆွဲသွင်းပါဝင်စေတာ၊ ပြီးတော့ အတိုက်အခံအင်အားစုတွေက လှုပ်ရှားမှု တွေကို ခပ်ထောင်ထောင်လေး တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လာနေတာတွေကိုတောင် စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ သည်းခံနေကြပါတယ်။ အပြောင်းအလဲဖြစ်စဉ်က စစ်တပ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအာဏာ အချုပ်အခြာနဲ့ စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားတွေကို အကဲမစမ်းသရွေ့ ဒီသည်းခံမှု ဟာ ဆက်ရှိမယ့်ပုံ ပေါ်ပါတယ်။
တွက်ရေးနဲ့ လက်တွေ့ ထင်သလောက် မကိုက်တာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ပွင့်လာတဲ့ တကယ့်ဖြစ်စဉ်ဟာ မမြင်ရတဲ့ နိုင်ငံရေးပရိယာယ် အလှည့်အပြောင်း တွေနဲ့ ရောပြွန်းနေပြီး မမျှော်မှန်းထားတဲ့ အကျိုးဆက်တွေဆီ ဦးတည်သွားနိုင်တာပါပဲ။ ဥပမာပြရရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) က မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးနီးပါး အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်လိုမျိုးပေါ့။။
အခုအချိန်ထိတော့ နောက်ပြန်လှည့်ဖို့လမ်းကို တပ်မတော်က မရွေးသေးပါဘူး။ အဲ့ဒီအစား စစ်ဗိုလ်တွေအတွက် ထိုင်ခုံနေရာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ဖွဲ့စည်းပုံက အာမခံထားတဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ တပ်မတော်ရဲ့ အနေအထားကို ပိုအားကောင်းလာအောင် ပါးပါးနပ်နပ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ လွှတ်တော်ထဲက စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ရာထူးကြီးတဲ့ တပ်မှူး ၅၉ ယောက် (ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ၃၉ ယောက်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ အယောက် ၂၀) နဲ့ အစားထိုးခဲ့တာပါပဲ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ လောလောဆယ် အရပ်သားကိုယ်စားလှယ် ၃၂၂ ယောက်နဲ့ စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ် ၁၁၀ ရှိပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာတော့ အရပ်သား ၁၆၈ ယောက်နဲ့ စစ်သား ၅၆ ယောက် ရှိပါတယ်။
အခုလို ရာထူးကြီးတဲ့ တပ်မှူးတွေ တပြုံတမနဲ့ အစားထိုးသွေးသစ်လောင်းတာဟာ လွှတ်တော်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD လွှတ်တော်အမတ်တွေကို စစ်တပ်က တန်ပြန်ထိန်းညှိဖို့ ပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာ့အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ အတော်များများက အဓိပ္ပါယ်ကောက်ကြပါတယ်။ NLD အမတ်တွေက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖို့နဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ အခွင့်အာဏာတွေကို လျှော့ချဖို့ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ အခိုင်အမာ ဆိုနေကြတာကိုး (လွှတ်တော်မှာ ကျမ်းကျိန်တဲ့ စာသားကို မပြောင်းပေးရင် လွှတ်တော်မတက်ဘူးလို့ ဆိုခဲ့ပေမယ့် သူနဲ့ သူ့ပါတီက လွှတ်တော်အမတ်တွေ လွှတ်တော်မှာ ကျမ်းကျိန်ဖို့ သဘောတူဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလို့ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်)။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လွှတ်တော်ကို တပ်မတော်က အရေးတယူ ပြုလာနေတာ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတခုပါ။ ဒါက လွှတ်တော်ကို ဘာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပဲ ချမှတ်ချမှတ် တံဆိပ်တုံးထုအတည်ပြုပေးရတဲ့ နေရာထက် ပိုတယ်လို့ အသိအမှတ်ပြုလာစေဖို့ ရှေ့တိုးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအစား အုပ်စိုးမှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းတရပ်၊ စစ်တပ်ရဲ့ သဘောထားမူဝါဒတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့ စင်မြင့်တခု၊ ပြီးတော့ မတူကွဲပြားမှုတွေရှိနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက အကျိုးစီးပွား အထွေထွေကို ပေါက်ကွဲမခံပဲ ထိန်းညှိနိုင်ဖို့ ယန္တရားတခုအဖြစ် စစ်တပ်က လွှတ်တော်ကို စတင် အမှီသဟဲ ပြုကောင်း ပြုလာတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေတွေ ဘယ်လိုပဲရှိနေနေ တပ်မတော်ကတော့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးရဲ့ နောက်ဆုံး အဆုံးအဖြတ်ပေးခွင့် အာဏာကို ဆက်လက်ချုပ်ကိုင်နေဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် အစောပိုင်းက ပြောခဲ့သလို ဥပဒေပြုအဖွဲ့အစည်း အင်စတီကျူးရှင်းတွေ တည်ဆောက်ဖို့ စစ်တပ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအာသီသနဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေကို ပစ်ပယ်ဖို့၊ လျှော့တွက်ဖို့ မသင့်ပါဘူး။ ကြမ္မာငင်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျန်တဲ့အင်စတီကျူးရှင်းတွေအားလုံး အခုထိ လုံးဝ အလုပ်မဖြစ်နိုင်ကြသေးလို့ပါ။
မင်းဇင်သည် ပြည်ပအခြေစိုက် သတင်းစာဆရာတဦး ဖြစ်ပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ် (ဘာကလေ) သတင်းစာပညာ ကျောင်း၌ သင်ကြား ပို့ချနေသည့် ဆရာတဦးဖြစ်ပါသည်။ Foreign Policy မဂ္ဂဇင်း၏ အွန်လိုင်းဘလော့ဂ် Transitions ပါ Military maneuvers (in Burma’s parliament) ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ရာဇာ May 10, 2012 - 5:43 pm	တပ်မတော် အနေနဲ့ တိုင်းပြည် အပေါ်မှာ သဘောထား ကောင်းပြီး ပြည်သူလူထု ကို အနိုင်မကျင့် ဘူး ဆိုရင် ကြိုက်တာ လုပ်နိုင်ပါတယ်….မြန်မာ တွေ ဒီလောက် သဘောထား မသေးပါဘူး…..လူမှန် ရင် လူလို သိဘို့ပါဘဲ…..
Reply	စပ်စု ( aus ) May 10, 2012 - 5:46 pm	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်တော်ထဲမှာ ထိုင်ခုံနေရာပေးတာ တမျိုးဘဲ ထိုင်ခုံက ဘေးဝဲယာမှာ ကြံ.ဖွံ.ပါတိတွေ နောက်မှာ စစ်သားတွေ
Reply	ဝတုတ် May 21, 2012 - 7:54 am	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးက ရွေးကောက်ခံရတဲ့ ပြည့်သူလွှတ်တော်များ အတူတူ တစ်တန်းတည်းထိုင်ရပါတယ်..။ ဒါကြောင့် သန်လျင်ဖက်က အရွေးခံရတဲ့ မြေသိမ်းဘီလူး ဇေကမ္ဘာဝတုတ် က ဘေးမှာ ထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်.
Reply	ကိုမိုက် May 10, 2012 - 10:49 pm	ဗမာစစ်တပ်နဲ. စစ်အုပ်စုဟာ ငါတို.မှသာတိုင်းပြည်ချစ်တာ ဆိုတဲ့မဏ္ဍပ်တိုင်တက်ပြတဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးကိုရှေ.လျှောက် ရှောင်ကြဉ်မှသာ ပြည်သူနဲ.တစ်သားတည်းရှိမယ့် လမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်ဖို. ရှိနေပါတယ်။
တစ်မြေတည်းနေသူချင်းအတူတူ အားလုံးဟာ တာဝန်ကိုယ်စီရှိနေတဲ့အတွက် ဒါကိုအသိအမှတ်မပြုခဲ့ရင် ခိုင်မြဲတဲ့တွဲလက်ကို ရေရှည်မှာမျှော်လင့်လို.မရနိုင်ပါ။
တကယ့်ကိုလင်းလက်တဲ့ တိုင်းပြည်အနာဂတ်ကိုလိုလားတယ်ဆိုရင် အခြောက်တိုက်နေရာဝင်ယူထားတဲ့ တစ်မတ်သားကိုယ်စားလှယ်များကို ပါးနပ်စွာလျှော့ချ ဖယ်ရှားခြင်းအား ကာချုပ်မှပြုလုပ်သင့်ပါကြောင်း။
Reply	ရင်ထွေး May 11, 2012 - 12:01 am	တရားအောင်လုပ်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ။ တရားဆိုတာက…(500)ရာလောက်ကိုယ်ကယူထားရင်…သူများကိုယ်လည်း(500)လောက်ပြန်ပေးနိုင်ရမယ်လေ…ဒါမှတရားမှာပေါ့ဗျာ…။
Reply	kk May 11, 2012 - 3:12 am	ဒုတိယကဘာစစ် ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲက ဂျာမန်နာဇီစစ်အာရှင်ရာဇ၀တ်ကောင်တွေနဲ့ တူတူပဲ
Reply	myinthe May 11, 2012 - 6:50 am	ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်ရေး ဖြစ်စဉ်မှာ nld ၊ ကြံ့ခိုင်ရေး နဲ့ တပ်မတော် တို့ လိုက်လျောညီထွေ လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ကြရင် ပြော်စရာကြီး၊ ဥပမာ အရင်က သတိမမူမိပဲ လွှတ်တော်တက်ခါနီးမှ သတိပြုမိခဲ့တဲ့ ကြမ်းသစ္စာ ကြိမ်ဆိုရမဲ့ ကိစ္စ ကို nld က လိုက်လျောပေးလိုက်တာမျိုး။
Reply	ိr May 11, 2012 - 9:49 am	မြန်မာက ရောင့်ရဲတင်းတိမ်တတ်သူ၊မကောင်းမှုကို
်အဂတိဘက်ရောက်သွားတာသနားစရာဆိုတာကို အရိုးမနိုင်တော့သိလာတတ်တာရှင်းရှင်းနားလည်ရင် အမျိုးဂုဏ်ဇာတိဂုဏ်အကြောင်းအတွေးရမှာပါ
Reply	PO THON NYA May 19, 2012 - 3:40 pm	iT IS IMPORTANT WHERE SHE SAT. i LIKE HER SEAT POSITION THAT SHE CAN DEALT WITH ARMY @ USDP PERSONNEL WITHOUT ARRANGING SPECIAL APPOINTMENT. SHE CAN MEET HER OWN PARTY MEMBERS ANYTIME SHE WANTS. DO NOT FORGRT THE POWER OF HER WISDOM TO DEALT WITH PEOPLE
Reply	ptu June 1, 2012 - 12:21 pm	အားလုံး မျှမျှတတလုပ်ဆောင်သွားဖို့လို့ပါတယ် ခု အချိန်မှာစစ်တပ်ကလည်း ပြည်သူကိုကြည်သင့်နေပြီ ပြည်သူကိုဂ၇ု မစိုက်တဲ့လုပ်၇ပ်မျိုးတွေလုံးဝမလုပ်သင့်တော့ပါဘူး အားလုံးပြည်သူအတွက် ကြိူးစားပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်
Reply	ptu June 1, 2012 - 12:22 pm	အားလုံးစည်းလုံးကြပါ
Reply	alfreadyoung July 15, 2012 - 8:45 pm	ဆရာဦးမင်းဇင်ရဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးပထမဆုံးအပိုဒ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကပြောတဲ့အောက်ခြေ